FIHANTSIANA MPITANDRO FILAMINANA : Omby efa anaty “fourrière” sahin’ny dahalo nangalarina
Mampibaribary ny tsy fandriam-pahalemana ao Tsiroanomandidy ny halatr’ omby niseho tany an-toerana, afak’omaly. Omby efa naiditra tao ambalam-pamonjana na “fourrière” mbola sahin-dry zalahy nangalarina ihany. 11 août 2017
Porofon’izany ny mbola nahasahian’izy ireo nangalatra ny omby efa nogiazana tao anatin’ny valaben’ny Kaominina. Amin’izao fotoana izao manatanteraka hetsika fampandrian-tany any amin’ireo toerana heverina ho tena mafana amin’ny asan-dahalo ny mpitandro filaminana ahitana ny Zandary sy ny miaramila.
Ao anatin’izay dia misy ny fitsirihana ireo kizo fanafenan’ny dahalo omby halatra, misy ihany koa hetsika natao izay nahatratrarana ireo omby tsy ara-dalàna kanefa nahavitana taratasy hosoka ary nokasaina hamidy teny an-tsenan’omby. Nandritra ny fotoana nisian’io fampandrian-tany io dia nahatratra 85 ireo omby tratra.
Mba hiandrasana ny tompony miaraka amin’ny fanamarinana rehetra dia tsy maintsy nogiazana nahitra “fourrière” tao amin’ny Kaominina aloha ireo omby sarona ireo. Afak’omaly anefa nanao tampody fohy ireo andian-dahalo maromaro niravaka fanafody sy nitondra fitaovam-piadiana nandroba ireo omby ireo. Lasa tamin’izany ny 21 tamin’ireo omby. Efa vita ny fandrobana vao nahazo antso ny mpitandro filaminana, teo vao raikitra ny fanarahan-dia ka nahatrarana ny efatra tamin’ireo olon-dratsy.
Tra-tehaka niaraka tamin’ireto farany ny ampahany tamin’ireo omby ary mbola ifampikarohana kosa ny sisa ambiny. Tsy hamelan’ireo mpitandro filaminana raha tsy tratra ireo dahalo ambiny.